Ishedyuli yoLondolozo lweToyota Corolla - Okunye
Ishedyuli yoLondolozo lweToyota Corolla
Xa ulandela ishedyuli yolondolozo lweToyota Corolla, unokuqiniseka ukuba imoto yakho iza kusebenza kakuhle iminyaka emininzi ezayo. Ukugcina ulondolozo oluqhelekileyo kwimoto yakho kuya kukunika uxolo lwengqondo kunye nokonga ixesha elide.
Ukugcina iToyota Corolla yakho
Imodeli nganye yonyaka weToyota Corolla inemisebenzi eyahlukileyo yolondolozo kunye namathuba acetyiswayo; Nangona kunjalo, unokufumana malunga neshedyuli ecetyiswayo yolondolozo lweCorolla yakho ngokuya kwi Inkonzo yakwaToyota iwebhusayithi. Apha, unokukhetha uhlobo lwesithuthi, unyaka wemodeli, kunye nesithuba se-mileage ukufumana ukuba ufuna nini ukulungiselela imoto yakho.
indlela yokuhlengahlengisa izibophelelo zokuskiya
Ngokwe-Toyota Parts and Service, le misebenzi ilandelayo yolondolozo iyafuneka kwi-Corolla ka-2010. Ziya kufana ngokufanayo nakweminye iminyaka yemodeli ngokunjalo.
Zonke iimayile ezingama-5 000 zokuqhuba okanye iiSemi-yoNyaka
Guqula ioyile kwaye ubeke endaweni yeefilitha zeoyile. KwiCorollas endala, unokufuna ukutshintsha ioyile rhoqo.
Hlola iziqhoboshi, kuquka iipads kunye nezigubhu.
Hlola amavili uze ujikeleze xa kufuneka njalo.
Zonke iimayile ezili-15,000 zokuqhuba okanye zonke iinyanga ezili-18
Jonga inqanaba lesipholisi se-injini, kwaye ujonge irediyetha.
Hlola imigca yokuqhekeza kunye nazo zonke izinto ezinxulumene noko.
Jonga amalungu ebhola.
Hlola iibhutsi kwi-drivehaft.
Vavanya iibhutsi zokuqhuba, unxibelelwano, kunye nebhokisi yebhokisi.
Jonga inkqubo yokukhupha.
Zonke iimayile ezingama-30,000 okanye qho emva kweminyaka emithathu
Guqula isihluzo somoya sekhabhathi.
Guqula isihluzi somoya senjini.
Jonga i-oyile umahluko wangaphambili.
Vavanya inkqubo yombane, kubandakanya i-gasket yetanki lamafutha, inkqubo yeefestile, imibhobho kunye neefaskoti, kunye nemigca yezibaso.
Zonke iimayile ezingama-60,000 zokuqhuba okanye qho emva kweminyaka emithandathu
Jonga iibhanti zokuqhuba.
Hlola ukosuleleka kolwelo kwaye utshintshe xa kufuneka njalo.
Zonke iimayile ezingama-100,000 okanye nangaphezulu
Faka endaweni yesipholisi kwiinjini kwi-100,000 yeemayile okanye kwiminyaka elishumi.
Faka endaweni yazo iintlantsi zeplagi rhoqo xa uqhuba iimayile ezili-120 000 okanye rhoqo emva kweminyaka eli-12.
Ulondolozo olongezelelweyo lweeMeko eziKhethekileyo zokuqhuba
Ishedyuli yolondolozo esemgangathweni isebenza kuphela xa uqhuba iCorolla yakho kwiimeko eziqhelekileyo. Ukuba uqhuba ngokuyintloko imoto yakho kwiindlela ezinothuli okanye kwindlela enzima kakhulu, kungafuneka ulandele ishedyuli yolondolozo eyahlukileyo. Ukuthaya inqwelwana erhuqwayo kunye neCorolla yakho kuyayifaka kuxinzelelo olongezelelekileyo kwaye kuya kufuna ulondolozo olongezelelekileyo. Gcina ukhumbula ukuba ngamanye amaxesha kuphela ukubuyela umva kweendlela okanye ukujongana nokuhamba ngokukhawuleza kweeyure akufuneki kulondolozo olulodwa.
Ulondolozo lweSemi-yoNyaka olongezelelweyo ngeeMeko eziZodwa
Faka imisebenzi eyongezelelweyo yolondolozo rhoqo kwiikhilomitha ezingama-5 000 okanye kwiinyanga ezintandathu ukuba uqhuba iCorolla yakho kwindawo enothuli:
imibuzo oza kuyibuza umyeni wakho wexesha elizayo
Jonga amalungu ebhola kwaye ujonge iibhutsi zokuqhuba.
Jonga kwaye, ukuba kukho imfuneko, buyisela isihluzi somoya senjini.
Qiniseka ukuba onke amandongomane kunye neebholithi ziqinile emzimbeni weCorolla nakwisisu semoto.
Ulondolozo lokuthambisa ngeCorolla yakho
Ukuba usebenzisa iCorolla yakho ukutsala itreyila, kuya kufuneka wenze le misebenzi ilandelayo:
Rhoqo kwiinyanga ezintandathu okanye kumawaka amahlanu eemayile, qiniseka ukuba onke amandongomane kunye neebholithi ziqinile.
Rhoqo emva kweminyaka emithathu okanye i-30,000 yeemayile, buyisela ioyile yokuhambisa ngesandla kunye nolwahluko lwangaphambili.
Ishedyuli yakho yeSondlo kunye newaranti yakho yeCorolla
Yonke iToyota Corollas entsha iza newaranti evela kumenzi wayo. Ngaphandle kokuba uthenge ukongeza, le waranti igubungela yonke imoto kwiminyaka emithathu yokuqala okanye iimayile ezingama-36,000. Ukongeza, iwaranti esemgangathweni ye-powertrain igubungela iinkqubo ezinkulu zemoto yakho kwaye ihlala iminyaka emihlanu okanye iimayile ezingama-60,000. Olu phengululo lubalulekile kwaye lubonelela ngoxolo lwengqondo, kodwa ukulandela ishedyuli yolondolozo oluchaziweyo kubalulekile. Ukuba awuyigcini iCorolla yakho ngokweshedyuli, unokuyiphelisa iwaranti yakho.
Iingcebiso zoLondolozo eziluncedo
Ngaba uziva ukhathazekile kancinci malunga neshedyuli yesondlo sakho? Ezi ngcebiso zinokukunceda ugcine umkhondo weemfuno zemoto yakho kunye nokugcina impilo yakho ngexesha elinye:
Gcina iirekhodi ezineenkcukacha malunga nesithuthi sakho. ICorolla yakho iza nelog yolondolozo. Ungayigcwalisa le nto qho xa unemoto oyisebenzelayo, kwaye uya kuba nengxelo eluncedo yokuba yenziwe nini inkonzo.
Ukuba uyabhideka malunga nokwenza ulondolozo usebenzisa ishedyuli yenyanga okanye ishedyuli esekwe kwimayile, sebenzisa nayiphi na into eza kuqala. Ukuba imoto yakho ineemayile ezingama-32,000 kuyo kodwa ineminyaka emibini kuphela ubudala, iselixesha lokutshintsha isihluzo somoya.
Ekuqaleni konyaka ngamnye, kunokukunceda ukumakisha ulondolozo olucwangcisiweyo kwikhalenda yakho. Emva koko uya kukhumbula ukucwangcisa ukuqeshwa kunye nokugcina impilo yakho yeCorolla.
Ungayilungisa imoto yakho kumthengisi weToyota okanye nakweyiphi na ivenkile egunyazisiweyo. Ngelixa imoto yakho isephantsi kwewaranti, ngamanye amaxesha kusengqiqweni ukuyisa kumthengisi ngenkonzo. Ngale ndlela, wena kunye nomthengisi ninerekhodi yokulungiswa kunye nokugcinwa kwemoto yakho.
Icandelo lokuba neMoto
Ulondolozo yinxalenye ebalulekileyo yokuba nemoto. Ukuba uqhubeka nolondolozo oluqhelekileyo lweToyota Corolla, unokulindela ukuba isithuthi sakho sikunike iminyaka yokusebenza ngaphandle kwengxaki.
Umbane Iiguitars Iselfowuni Iifowuni Imithi Celiac Disease Abantu Abadumileyo
Ndifuna ukwenza uthando kuwe ileta
ukuseta kwakhona iselfowuni
zithini imibala kwiiringi zemood
Uxolo ngokusweleka kukatata wakho
Kukangaphi izinja zishushu?
indlela yokwenza kuye